11 Inoshamisa NZIRA MATLAB Inoita Hupenyu Hwedu Hwezuva Nezuva Kureruka Uye Kunetsa-Mahara - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data Analytics, MATLAB
11 Inoshamisa NZIRA MATLAB Inoita Hupenyu Hwedu Hwezuva Nezuva Kureruka Uye Kunetsa-Mahara
“NdiMATLAB, ndinokwanisa kunyora nekugadzirisa kugona kutsva nekukurumidza zvakanyanya kupfuura nemimwe mitauro. Kucheka yedu yekuvandudza nguva nepakati neMATLAB kwakabatsira mukukwanisa kwedu kusangana nenguva yakaoma. Mutengi wedu aive nechokwadi chekuti ndanga ndashanda maawa makumi manomwe pasvondo paakaona zvawanikwa. Bancroft Henderson, EM Mhinduro.
Pasina mubvunzo, kuwedzera kudiwa uye kufarirwa kweMATLAB munyika yeinjiniya uye software Developers haigone kukanganiswa mune ino nguva. MATLAB chinhu chakakosha kune vesaenzi, vaongorori, uye mainjiniya. Hupfumi hweMATLAB computational nharaunda pamwe chete neyakavandudzwa nharaunda yekuvandudza inogadzira yekutsvagisa uye yekuvandudza chishandiso chinoenzana kune hapana mumusika.
Kubva kukurumidza kodhi prototyping kune yakazara-inopeputswa mashandisirwo ekushandisa, iyi software isinganetsi inomira seye de facto mutauro wekuvandudza unoshanda zvido zvehunyanzvi zveboka rakasiyana revashandisi. Zvino, kunze kwekuva knight mune inopenya nhumbi dzokurwa dzemainjiniya nemasayendisiti, MATLAB inogona kushandiswa mune dzimwe nzira dzisingaverengeke nevanhu vasingaverengeke mumabasa iwe aungasaziva kusvika nhasi.
Mune yanhasi blog posvo, isu tichave tichigovana mamwe chaiwo-hupenyu mashandiro eMATLAB uye nenzira dzinoshamisa idzo dzaingaite kuti hupenyu hwedu hwezuva nezuva huve nyore. Kuverenga iyi yakazara blog ichavhura nzira nyowani yeruzivo, uye iwe unozotanga kutarisa MATLAB zvakasiyana nezvazvino. (Isu tinovimbisa!)
Pasina chero imwezve ado, ngatiendei kune ma deets. Todii?
Izvo Zvakanakisa Zvakanakira Zvishandiso zveMATLAB
Mazuva ese-ne-zuva matekinoroji ari kuve achifambira mberi ane zvisingaverengeke maficha uye anobatsira mafomu. Kunze kweaya akavandudzwa uye epamberi matekinoroji, MATLAB ndomumwe wavo.
Kune akawanda MATLAB mafomu atinoshandisa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Nehurombo, isu hatisi kungoziva nezvavo kusvikira zvino. Ngatitarisei iyo chaiyo-yehupenyu mienzaniso patinoshandisa MATLAB uye nemabatiro ainoita hupenyu hwedu hwezuva nezuva-
1. Kudzora Sisitimu Dhizaini
Model-akavaka dhizaini masisitimu uye ekudzora-dhizaini masisitimu ari kukura nekukurumidza. Iyo yekudzora system teki bhokisi rinoshandiswa kugadzira aya otomatiki ekudzora masystem.
A control system inoitisa manejimendi, kupa mirairo, uye kugadzirisa maitiro emamwe madhizaini kana masisitimu. Iyo yakavakirwa pazvidzitiro zvishwe. Iyo yekudzivirira system teki bhokisi reMATLAB inopa algorithms uye maapplication ekurongedza kuongorora, kugadzira, uye kugadzirisa mitsara yekudzora masisitimu. Iwe unogona zvakare kuita nekukurumidza prototyping, kuongororwa kweiyo system, uye zvimwe zvakawanda zvimwe zvinhu.
Zvirinyore hita dzekudziya, michina yekuwachisa, uye makamera ndiyo mienzaniso yakanakisa yesystem system.
2. Digital Signal Kugadziriswa
Dhijitari siginari yekugadzirisa ndiko kushandiswa kwedhijitari kugadzirisa senge nemakomputa kana akasarudzika madhijitari eanodhizaina processor kuti aite huwandu hwesimba yekugadzirisa mashandiro. Iko kushandiswa kweMATLAB zvigadzirwa zvinoita kuti zvive nyore kushandisa maekisheni ekugadzirisa mameseji kuongorora nguva-dzakateedzana data uye zvakare inopa yakabatana kufambiswa kwekufambisa kwekuvandudza masisitimu akapindirwa uye kushambadzira kunyorera. Kuongorora michina, michina yefax, dhijitari tepi masystem ndiyo mienzaniso yakanakisa yeiyo DSP system.
3. Wireless Kutaurirana
Kutaurirana pasina waya ndeyakareba izwi rinoshandiswa kubatanidza zvishandiso zviviri uchishandisa chiratidzo chisina waya. Matimu muinjiniya isina waya anoshandisa MATLAB kudzikisira iyo nguva yekuvandudza, kubvisa matambudziko ekutanga ekugadzira, kururamisa kuyedza uye kuongorora.
4. Kugadziriswa Kwemifananidzo Uye Computer Vision
Kana iwe ukanyatso tarisa pane iyo 'nyora bepa rangu'dzidziso dzepamoyo dzakanakisa dzakabatana neindasitiri iyi, iwe waizonzwisisa kuti kugadzirisa mifananidzo kunonyanya kutarisana nekugadziriswa kwemifananidzo mbishi. Izvo zvinoitawo kuti vagadzirire mamwe mabasa senge ekuona kwemakomputa. Kune rimwe divi, kuona kwemakomputa kunotarisa mifananidzo yakafanana neziso remunhu. Inosanganisira kunzwisisa uye kufanotaura zvinoonekwa. Iko kushandiswa kweMATLAB kunopa yakazara nzvimbo yekuongorora iyi mifananidzo uye kugadzira algorithms zvakanaka.
5. Yakabudiswa Systems
Akabatanidzwa masystem makomputa masisitimu ayo ane zvigadzirwa zvemagetsi uye software. Izvo zvakagadzirirwa kuita rakatarwa basa. Mimwe mienzaniso inoshamisa yeakadzvanywa masisitimu emuchina wekuwachisa, maprinta, mota, makamera, maindasitiri michina, uye zvakafanana. Ne Push yebhatani rimwe, MATLAB inobvumidza kuburitsa kodhi uye kuimhanya pane Hardware.
Robotics inzvimbo yakasangana yesainzi neinjiniya. Inobatanidza meinjiniya, zvemagetsi enjiniya, uye sainzi yemakomputa kugadzira marobhoti kana michina yakafanana nevanhu. Vanotsvaga marobhoti uye mainjiniya vanoshandisa MATLAB kugadzira uye kugadzirisa algorithms, chaiwo-epasi mamodheru masisitimu, uye kugadzira kodhi zvinobudirira- zvese kubva kune imwechete software nharaunda.
Mechatronics tekinoroji musanganiswa unoshamisa wemaviri einjiniya hova- mechnical uye emagetsi enjiniya. Mechatronic masystem anoda kusanganisa meaniki, emagetsi kutonga, uye akaisirwa software subsystems. Iko kushandiswa kweMATLAB kunokubatsira iwe kugadzira uye kutevedzera zvese izvi munzvimbo imwechete.
8. Computational Biology uye Computational Mari
Computational Biology ndeye kudzidza kwehupenyu hwe data kune iyo-yakadzika nzwisiso yehupenyu masisitimu uye hukama. Kune rimwe divi, computational mari ndeye kudzidza kwemari data uye modelling. Iko kushandiswa kweMATLAB murukova urwu kunobatsira kugadzirisa zvakajairika kusiyanisa equation iyo inoratidza maitiro ehupenyu. Kupfuurirazve, iyo MATLAB computational yezvemari suite inokubatsira iwe mukugadzira huwandu hwekushandisa kwekuchengetedza njodzi, inishuwarenzi, inivhesitimendi manejimendi, uye econometrics.
9. IoT (Internet yezvinhu)
Internet of Things is the network of vehicles, devices, home appliances, and others embedded with electronics, sensors, software, actuators, and connectivity. The combination of these enables the exchange of data. The use of MATLAB in the IoT helps in designing, prototyping, and deployment of IoT applications like operations optimization, predictive maintenance, supervisory control, etc.
Izvi zvinoreva maitiro ekudzidza dhata kuti uwane nzwisiso yakazara. Inonyanya kuitwa nerubatsiro rweimwe software uye maturusi. Asi, munguva yemazuva ano, mainjiniya uye nyanzvi dzeIT vari kushandisa MATLAB kugadzira guru Data Analytics Zvirongwa.
11. Biotechnology, Kurapa, uye Mishonga
Iyi minda inosanganisira kuvandudzwa kwemishonga mitsva uye mimwe nezveutano ruzivo. Nekushandisa kweMATLAB software, tinogona kugadzira yakasarudzika modhi sisitimu, simbisa dhizaini dhizaini, kutevedzera maalgorithms, zano, kana yakagadziriswa mamisheni bvunzo.
Endoscopic michina, MRI scanner, kana Radiation base michina mienzaniso inoshamisa yeaya masisitimu.
Iye zvino zvatakapfuura nemanyorerwo ese makuru ekushandisa kweMATLAB muhupenyu chaihwo, tinogona kutaura zvakachengeteka kuti ndiwo mumwe wemitauro ine simba kwazvo inobatsira mukusimudzira kweanenge maindasitiri ese. Isu tinoshandisa akawanda ekushandisa anoshanda akataurwa pamusoro apa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva tisina kana kuziva.
Iwe unofunga kuti isu tasiya nzira dzakakosha MATLAB inobatsira munharaunda yedu? Bhura kunze muchikamu chemashoko pazasi.
Data Sayenzi uye Kushanda Kwayo
Aug 21 | Big Data Analytics, Data Science
Data sainzi ndiko kudzidza & kupatsanura ruzivo rwakakosha rwebhizinesi runogona kushandiswa kuita sarudzo dzebhizimusi zvine hungwaru.
Jul 28 | analytics, Big Data Analytics, Kuona analytics
Visual Analytics inotarisa pamifananidzo yekuona uye inoshandisa maitiro ekuona kuongorora data uye kududzira mhedzisiro yekuita sarudzo dzakanaka.
5 Kunyorera kweRegression Analysis muBhizinesi
Apr 18 | Big data, Big Data Analytics
Kuongorora kudzoreredza kunogona kuongorora kukanganiswa kwezvinhu zvakasiyana pamabhizimusi kutengesa uye purofiti. Pano kumwe kunyorera kwekuregedza kuongorora mubhizinesi: